Isan-karazany amin'ny iPhone | IPhone News (Pejy 4)
Fitsarana an'i Apple amin'ny injenieran'ny puce: 2 hatramin'ny 1 hatreto
Fitsarana injeniera Apple vs. Chip: 2 hatramin'ny 1 hatreto. Miampanga an'i Williams ho mahaleo tena ny orinasa amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny haitao chip.
Facebook dia mametraka ny hevitry ny doka ao amin'ny WhatsApp
Facebook dia mitahiry ny hevitry ny doka ao amin'ny WhatsApp. Raha misy izany dia tokony hampandre ny mpampiasa ilay fampiharana ary mahatonga izany hisalasala i Zuckerberg.
Ny fantsom-pandrefesana fitbit dia manomboka mandrefy ny habetsan'ny oksizenina ao anaty ra
Vao avy nialoha an'i Apple indray ny orinasa Fitbit ary nanomboka nanolotra fampiasa vaovao ho an'ny ...
Ny maraina Show dia nahazo ny loka voalohany tamin'ny alàlan'ny Billy Cudrup
Apple dia nahazo ny loka voalohany tamin'ny serivisy horonantsary mivantana tamin'ny alàlan'ny Billy Cudrup niaraka tamin'ny andiany The Morning Show
MacX MediaTrans, ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao
MacX Media Trans no mpisolo toerana tonga lafatra an'ny iTunes ankehitriny satria tsy misy intsony ao amin'ny kinova CatOS Catalina.
Ataovy miavaka ny AirPods Pro amin'ny loko marobe miaraka amin'ny ColorWare
Raha iray amin'ireo maniry te hanana AirPod amin'ny loko hafa ankoatry ny fotsy ianao dia manana vahaolana amin'izany ny ColorWare.
Afaka mampiasa iPhone izao ny mpiasam-panjakana any San Francisco
Andro tsara ho an'ny mpiasam-panjakana ao San Francisco, ankehitriny dia ho afaka hampiasa ny iPhone-n'izy ireo indray izy ireo aorian'ny antsasaky ny taona mandrarana.
LIFX dia mampahafantatra takamoa jiro mazava tsara amin'ny CES 2020
Tela-bozaka LIFX telo vaovao naseho tao amin'ny CES. Amin'ity tranga ity dia jiro marani-tsaina izy ireo miaraka amina endrika filamenta
Nilaza ny mpandinika Goldman Sachs fa hamoy ny ampahatelon'ny sandany i Apple amin'ny taona 2020
Ny taona vao natombokay dia mety ho mafy tokoa ho an'i Apple raha ny filazan'i Goldman Sachs, satria mety hahavery hatramin'ny ampahatelon'ny sandany.
Ny iPhone SE2 vaovao na iPhone 9 vaovao dia ho hita amin'ny famoahana
Ankehitriny ny iPhone SE2 na iPhone 9 heverin'ny Apple fa tsy ho ela dia tafaporitsaka, hanana ilay iPhone mora vidy ihany ve isika amin'ny farany?
Ireo finday avo lenta 9 finday avo lenta navondrona tany Etazonia tamin'ity Krismasy ity dia iPhones avokoa
Ireo finday avo lenta 9 natsangana tany Etazonia tamin'ity Noely ity dia iPhones avokoa. Ny fahafolo dia tsy an'ny Apple, fa avy amin'i Xiaomi.
Tamin'ny faran'ny taona, hafatra maherin'ny 100.000 tapitrisa no nalefan'ny WhatsApp
Tamin'ny faran'ny taona, hafatra maherin'ny 100.000 tapitrisa no nalefan'ny WhatsApp manerantany, miaraka amin'ny sary maherin'ny 12.000 tapitrisa
Ireo iPhones manaraka dia antenaina hanana efijery manify sy mahomby kokoa
Ny iPhones amin'ny taona 2020 dia antenaina fa hanana fampisehoana manify kokoa ary mety mahomby kokoa nataon'ny LG Display.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny chat WhatsApp-nao amin'ny iCloud
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny chat WhatsApp-nao amin'ny iCloud. Tadidio fa ity fampiharana ity dia mitahiry ny tantaran'ny chat amin'ny iPhone fa tsy amin'ny mpizara azy.
Ahoana ny fomba hamafana ny iPhone, iPad na Mac anao alohan'ny hamarotana azy
Ahoana ny fomba hamafana ny iPhone, iPad na Mac anao alohan'ny hamarotana azy, na hamerenana azy amin'ny magazay. Ilaina ny mamafa ny angon-drakitrao manokana.
Inona ny miniLED azon'ny iPad sy Mac manaraka an'i Apple
Apple dia afaka manomboka mampiasa efijery miniLED amin'ny iPad sy Mac manaraka hanombohana, ary manazava izay misy an'ity haitao ity izahay.
Apple dia maka ny 66% amin'ny tombony totalin'ny indostrian'ny smartphone
Apple dia mbola orinasa manome vola be indrindra amin'ny sehatry ny telephony, na dia tsy mifantoka intsony aza ny 100% -n'ny tombom-barotra.
Nanome anao AirPods sasany ve izy ireo? Torohevitra vitsivitsy hanombohana
Nanome anao AirPods sasany ve izy ireo? Mampiseho torohevitra vitsivitsy anao izahay hanombohana mampiasa azy ireo, na ireo Airpods na ilay AirPods Pro vaovao
Lalao sasany natolotry ny Apple ao amin'ny Apple Arcade ho an'ireo fialantsasatra ireo
Apple dia mandefa horonantsary misy lalao Apple Arcade maromaro hampiroborobo azy ireo mandritra ny fialantsasatra
Ny fandefasana angon-drakitra mankany iPhone avy amin'ny satelita dia tena tetik'asa Apple
Apple dia hanana ekipa manokana miasa handefasana data mivantana avy amin'ny satelita mankany amin'ny iPhone. Tetikasa izay vao nanomboka tao Cupertino
Apple dia mamaritra ny fepetra takiana amin'ny MFi ho an'ny flashes izay azo ampifanarahana amin'ny iPhone
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mitondra ny fanamarinana Mfi amin'ny tselatra ivelany mba hifandraisany amin'ny iPhone 11 ao anatiny.
MacX Video Converter Pro: Manova, manova, misintona horonantsary 4K (Tolotra manokana)
Raha mitady rindranasa afaka miovaova eo anelanelan'ny endrika horonantsary ianao, MacX Video Converter Pro no fampiharana tsara indrindra hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao
Ny tsaho rehetra momba ny iPhones amin'ny taona 2020 mandraka androany
Ireo tovolahy avy amin'ny South South dia mandefa ny AirSnap Pro vaovao, tranga iray hiarovana ny AirPods Pro vaovao antsika amin'ny ratra sy ny gorodona.
Niverina ny fanambin'ny taona vaovao taorian'ny tsy naha teo azy tamin'ny taona 2019
Mandritra ny andro voalohany amin'ny 2020, dia afaka mahazo medaly manokana amin'ny fanambin'ny Taom-baovao isika, nanitsy i Apple.
Tonga ao amin'ny VideoProc ny Noely miaraka amin'ny fihenam-bidy 60% [Lahatsary horonantsary rehetra]
Akaiky ny krismasy, fotoana iray ananan'ny taona maro ny fianakaviana manana ...
Mifanaraka amin'ny AirPods ve ireo Echo Buds? Ny marina dia tsia
Mifanaraka amin'ny AirPods ve ireo Echo Buds? Ny marina dia tsia. Lavitra ny kalitao atolotry ny headphone Apple izy ireo
Ahoana ny fomba hijerena ny FC Barcelona mahazatra vs Real Madrid amin'ny iPhone na iPad-nao
Ny lalao tsara indrindra amin'ny fihodinana voalohany any La Liga dia eto ary tsy azontsika atao ny tsy mahita antsipiriany iray akory. Ahoana no ahitantsika ny kilasika amin'ny iPhone
Apple dia manavao ny firmware an'ny AirPods 2 sy AirPods Pro
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia manavao ny firmware an'ny AirPods Pro sy AirPods 2 mba hamahana ireo hadisoana rindrambaiko kely mety ananany
Apple dia mandefa famandrihana isan-taona amin'ny Apple Arcade amin'ny vidiny 49,99 euro
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mandefa drafitra Apple Arcade fanao isan-taona izay hitsimbinana 10 euro isan-taona, na izay mitovy amin'izany, roa volana.
Farany ara-panatanjahantena Ultimate Rivals tonga ao amin'ny Apple Arcade
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia mandefa Ultimate Rivals ao amin'ny Apple Arcade, lalao video voalohany amin'ny franchise sports izay manomboka amin'ny lalao hockey.
Miaraka amin'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny iOS 13.3
Tsy tianao ny lavitra Apple TV? Azonao atao ny mividy ity Soisa nentim-paharazana soisa ity
Tsy tianao ny lavitra Apple TV? Azonao atao ny mividy ity remote ity amin'ny orinasa Internet sy fahitalavitra Soisa nentim-paharazana
iOS 13.3 dia ho tonga amin'ny 10 Desambra ho avy izao
Amin'ity tranga ity, ny zava-drehetra dia manondro fa ny iOS 13.3 no fanavaozana Krismasy lehibe isan-taona ary ho hita amin'ny 10 Desambra.
Ny iPhone SE 2 dia mety ho lasa iPhone 9
Apple dia afaka mandefa iPhone vaovao sy mora kokoa amin'ity lohataona ity, izay mpandimby ilay iPhone SE malaza, ary afaka miantso azy io hoe iPhone 9.
Apple dia manavao ny fampiharana Clips mamela antsika hampiasa Animojis, Memojis, ary sticker
Apple dia manavao ny fampiharana famoronana horonantsary sosialy, Clips, manampy ny Animojis, Memojis, ary sticker vaovao avy amin'ny orinasa Disney.
Ny iPhone SE2 Plus miaraka amina toerana kely kokoa ho an'ny 2021
Araka ny fanazavan'ilay mpandalina Ming-Chi Kuo amin'ny tatitra vaovao dia mikasa ny handefa iPhone SE2 vaovao i Apple amin'ny 2021
Ny mpilalao sarimihetsika Apple TV + "Foundation" dia saika vita
Ny mpilalao sarimihetsika vaovao novokarin'i Apple, Foundation, miorina amin'ny tantara nosoratan'i Isaac Asimov, dia mitombo ary efa akaiky hikatona.
CarPlay dia mitentina 110 euro isan-taona amin'ireo tompona BMW
Tsy hanafatra ny mpanjifa amin'ny fiarany intsony i BMW amin'ny fampiasana CarPlay. Vola 110 euro isan-taona izay tsy nisy dikany ny hamoahana azy
Tratran'ny polisy ny mpangalatra Apple Watch satria ataon'ny tompony maneno io
Tratran'ny polisy ireo mpangalatra Apple Watch satria ataon'ny tompony maneno eo afovoan'ny fikarohana ao anaty motera mampiahiahy izy io.
Isan'andro - fisehoana LCD, OLED, miniLED ary microLED
Miresaka momba ny efijery miniLED sy microLED vaovao izay mety ho tonga amin'ny fitaovana Apple raha vantany vao amin'ny taona 2020 manaraka.
Isan'andro - Inona no azonao atao amin'ny NFC an'ny iPhone-nao
Miresaka momba ny NFC an'ny iPhone izahay, teknolojia ahafahantsika mandoa amin'ny alalàn'ny Apple Pay fa manana safidy maro hafa koa ankehitriny
2020 iPhones dia mety ahitana sensor momba ny tanan-tanan'ny Qualcomm ao anaty efijery
Apple dia afaka mampiditra sensor fantsom-pandrefesana indray amin'ny iPhone manaraka, tafiditra ao amin'ny efijery ary miaraka amin'ny haitao Qualcomm
iFixit dia manazava ny fomba fiasan'ny bokotra fakantsary an'ny Smart Battery Case
Ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia tsy nahatohitra ny famakafakana ny Smart Case iPhone 11 ary nanoro anay ny antony ananany bokotra natokana ho an'ny fakantsary.
Pixelmator Photo, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Na dia hatramin'ny zoma ho avy izao aza dia tsy ankalazaina amin'ny fomba ofisialy ny zoma mainty, maro ireo orinasa efa nanomboka ...
MacX DVD Ripper Pro - Rip DVD mankany MP4 mora foana (fahazoan-dàlana 500 isan'andro)
Raha te hanana fahazoan-dàlana maimaim-poana hampiasa MacX DVD Ripper Pro ianao ary handroba ireo DVD anao ho MP4, manohy miditra fotsiny eto ary araho ny dingana
Apple dia mandefa promo ho an'ny Truth Be Told, andiany Apple TV + vaovao miaraka amin'i Octavia Spencer sy Aaron Paul
Ny bandy Cupertino dia mandefa ny promo ho an'ny Truth Be Told, andiany Apple TV + vaovao miaraka amin'i Octavia Spencer (Maids and Ladies) ary Aaron Paul (Breaking Bad).
Eto ny doka noely nataon'i Apple ary manafana ny fo
Mitranga amin'i Apple toa an'i Coca-Cola izy io, matetika ny fanambarany amin'ny daty manokana dia miteraka fientanam-po amin'ny fametrahana ary ...
Apple dia nanomboka nanamboatra ny iPhone XR any India
Apple dia mahita tsena tena mahaliana any Shina, indrindra amin'ny lafiny tombony ara-toekarena, saingy miova ny raharaha ...
Fitsapana ny IKEA HomeKit miaraka amin'ny jiro Tradfri
Notsapainay ny kojakoja IKEA Tradfri mifanaraka amin'ny HomeKit, ny fikirakiran'izy ireo ary ny fiasan'izy ireo amin'ny sehatra Apple automation.
Ny tranokalan'i Apple dia tsy mampiseho ny hevitry ny mpanjifa intsony momba ny vokatra
Apple dia nanafoana ny tombana izay nanehoany taminay ny vokatra rehetra atolotray antsika amin'ny alàlan'ny Apple Store an-tserasera.
Joker dia mampiasa ny Airpods ho toy ny famitahana
Fony mbola zaza isika dia nanao vazivazy tsy manan-tsiny mba hihomehezana amin'ireo olona nandalo teny amin'ny arabe. Vazivazy mahazatra (hoe ...
Ny Smart Battery ho an'ny iPhone 11 Pro Max dia mampiditra bokotra voatokana hanokafana ny fakantsary
Ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone 11 sy ny iPhone 11 Pro Max miaraka amin'ny bokotra voatokana ho an'ny fakantsary dia azo alaina ao amin'ny Apple Store
Elago dia mandefa tranga AirPods aingam-panahy iPod vaovao
Raha mila tranga iray tany am-boalohany ianao hiarovana ny tranga fiampangana ny AirPods anao, Elago dia manolotra antsika iray miaraka amina endrika mampatsiahy ilay iPod tany am-boalohany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny INE tsy hanara-maso ny fivezivezena
Raha te hisoroka ny Ivontoeram-pirenena momba ny statistika ianao tsy hahazo ny toeran'ny terminal anao ary hahafantatra ny toerana alehanao mandritra ireo andro ireo dia ity no fomba hialana amin'izany.
Fahafatesana 42 taty aoriana dia nesorin'i Apple ny app vaping tao amin'ny App Store
Apple dia nanala avy amin'ny App Store maherin'ny 180 ny fampiharana mifandraika amin'ny "vaping" sigara elektronika
Apple Research dia mandefa fanadihadiana vaovao momba ny fihainoana, ny fo, ny hetsika ary ny fahasalaman'ny vehivavy
Apple Research dia mandefa fanadihadiana vaovao momba ny fihainoana, ny fo, ny hetsika ary ny fahasalaman'ny vehivavy any Etazonia
Kitapo manampy Apple TV +, Apple News + ary Apple Music?
Apple dia mety mieritreritra ny hametraka ny serivisy maromaro ao anaty fonosana iraisana. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Apple TV +, Apple News + ary Apple Music izahay
HomeKit dia mbola tena zava-dehibe amin'ny Apple
Apple dia tokony hampiasa loharanom-bola hanatsarana sy hanitarana ny asany lehibe vita amin'ny HomeKit sy ireo fitaovana rehetra mifanaraka aminy.
Ny solomaso AR an'i Apple dia mitohy hatrany ny resaka tsaho
Ny fampahalalana vaovao momba ny solomaso fitomboan'ny zava-misy avy any Apple dia manondro fa tsy hahita azy ireo isika hatramin'ny 2022 ary hahita vaovao isika amin'ny 2023
Roku dia handefa fampiharana ho an'ny Apple Watch
Roku dia handefa fampiharana ho an'ny Apple Watch izay hahafahantsika mitantana ireo fitaovana amin'ny alalàn'ny tànantsika miaraka amin'ny baikon'ny feo.
Niato tamin'ny sonia ny iOS 13.1.3 i Apple, tsy azo atao ny mihena
Ankehitriny dia najanon'i Apple ny sonia ny iOS 13.1.3 ka tsy ho azonao atao ny mihena amin'ny kinova iOS 13.2, tsy misy miverina intsony.
Misy izao ny iOS 13.2.2 sy iPadOS 13.2.2 manitsy ny olan'ny fandrakofana sy ny fanakatonana ny rindranasa
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, betsaka ny voalaza momba ny asa mafy ataon'ny iOS izay manakatona fampiharana any aoriana ...
Mazava ny Tim Cook: AirPods Pro dia tsy mpisolo toerana ny AirPods
Ny tale jeneralin'ny Apple dia te hanazava fa ny AirPods Pro dia tsy hanolo ny AirPod mahazatra, fa izy ireo kosa dia mifameno.
Adobe Photoshop dia tonga amin'ny iPad. Azonao atao izao ny misintona ny Photoshop feno ho an'ny iOS
Adobe namoaka Photoshop ho an'ny iPad. Azontsika atao izao ny misintona ny kinova desktop an'ny mpanoratra sary malaza Adobe amin'ny iPads anay.
Manampia endritsoratra an'arivony amin'ny iPhone sy iPad amin'ny Adobe Creative Cloud
Manampia endritsoratra an'arivony amin'ny iPhone sy iPad miaraka amin'ny fampiharana Adobe Creative Cloud. Endritsoratra maimaimpoana 1.300 17.000 ary XNUMX raha misoratra amin'ny drafitra Adobe ianao
Voamarina ny fividianan'i Fitbit an'i Google
Ny tsaho izay nanondro ny fahalianan'ny Google an'i Fitibt dia voamarina tamin'ny fomba ofisialy ihany ary nanambara ny fividianana ny farany amin'ny alfabeta.
Ny Mi Watch dia henatra ambin'ny folo ambin'ny folo an'i Xiaomi amin'ny famolavolana
Ny sasany amin'ireo volavolany dia efa mampihomehy, ny ohatra farany dia ny Xiaomi Mi Watch, famantaranandro izay toa ny endrik'ilay izy, Apple Watch "mora".
Apple Pay dia mihoatra an'i Starbucks ho toy ny sehatra fandoavam-bola be mpampiasa indrindra any Etazonia
Ny sehatra fandoavam-bola tsy misy tariby an'ny Apple, Apple Pay, dia nahavita nahatratra an'i Starbucks ho toy ny sehatra fandoavam-bola be mpampiasa indrindra any Etazonia miaraka amin'ireo mpampiasa 30 tapitrisa.
Ny beta fahefatra an'ny iOS 13.2 ho an'ny mpamorona dia efa misy izao
Ireo mpizara Cupertino dia nanao ny beta fahefatra an'ny iOS 13.2 ho an'ny vondrom-piarahamonina mpamorona
Bob Iger dia manala ny tratrany amin'ny atiny ao amin'ny Disney +
Ny tale jeneralin'ny Disney Bob Iger dia tsy manahy momba ny vidin'ny serivisy Apple TV + ary manazava fa hafa ny serivisy Disney +
Apple dia miasa amin'ny mpanamboatra memo mandeha ho azy
Apple dia miasa amin'ny rafitra mamorona Memojis natokana ho an'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny sarin'izy ireo, ka tsy mila mamorona anay manokana izahay.
Ny fanitsakitsahana ny fiarovana dia mampiharihary Samsung rehetra miaraka amina sensor an-efijery
Samsung dia voarohirohy amin'ny tantara ratsy momba ny fiarovana, ny fitaovan'ny sensor rehetra momba ny dian-tànana dia miaina lesoka amin'ny fiarovana lehibe.
Tara ny tantara mahatalanjona ary 300 tapitrisa dolara dolara ny teti-dratsy ataon'ny Morning Show
Iray amin'ireo andian-tsarimihetsika andrasana indrindra amin'ny alàlan'ny horonan-tsarimihetsika Apple streaming, Amazin Stories, dia miaritra fahatarana vaovao noho ny fahasamihafana eo amin'ny famoronana.
Apple dia nanavao ny 'AirPort Utility' amin'ny kinova 1.3.6
Navoaka ny AirPort Utility kinova 1.3.6 hamahana ireo olana sy hadisoana voalaza ao amin'ny iOS 13 vaovao
Ikinema, orinasa iray manokana amin'ny effets visuels, dia Apple izao
Apple dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fividianana Ikinema, orinasa iray any UK izay manao effets visuels miavaka ary mampitombo ny zava-misy
Manohana maody maizina ny maizina izao
Ny kinova vaovao an'ny Overcast navoaka ho an'ny fitaovana iOS dia efa manohana ny maody maizin'i Apple. Tokony ho ao amin'ny iOS 13 na avo kokoa ianao
"Crossy Road Castle" dia ho tonga ao amin'ny Apple Arcade
Hatramin'ny taona manaraka dia tsy afaka mizara fampirimana amin'ny alàlan'ny iCloud izahay
Ny fahaizana mizara lahatahiry amin'ny alàlan'ny iCloud dia ho zava-misy amin'ny taona ho avy fa tsy amin'ny fanombohana macOS Catalina araka ny nambara.
Siri dia efa naman'ny Spotify: afaka mangataka mozika ankafizinao ianao izao
Rehefa avy niandry ela dia tonga ihany ny andro. Spotify dia efa mifanaraka amin'ny Siri, noho ny fanavaozana natomboka ...
Afaka mifidy multiSIM amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny O2 ianao izao
IOS 13.2 beta dia misy firesahana ireo AirPods manafoana ny tabataba
Toa manondro ny zava-drehetra fa tsy ho ela dia afaka manolotra ny taranaka fahatelo an'ny AirPods i Apple, miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba ny zava-baovao.
Azonao atao izao ny misintona Call of Duty: Mobile amin'ny iPhone sy iPad-nao
Call of Duty: Mobile, ny saga mandrakizay dia misy ao amin'ny iOS App Store ary mifanaraka amin'ny iPhone sy ny iPad.
Nanamafy i Tim Cook fa hahatratra firenena maro i Apple Card
Tamin'ny fitsidihany farany tany Eropa dia nilaza i Tim Cook avy any Alemana fa mikasa ny handefa Apple Card any amin'ny firenena maro izy ato ho ato.
BatteryTop dia mampiseho anao ny batterin'ny iPhone amin'ny Apple Watch
BatteryTop dia mampiseho aminao ny habetsaky ny fiampangana navoakan'ny iPhone amin'ny Apple Watch anao, miaraka amin'ny fahasarotana miaraka amin'ny fidirana haingana
iOS 13 dia efa eo amin'ny 20% amin'ireo fitaovana tohanan'ny herinandro iray aorian'ny fandefasana azy
Herinandro aorian'ny famoahana ny kinova farany an'ny iOS 13 ho an'ny iPhone, ny kinova iOS vaovao dia misy amin'ny 20% amin'ireo fitaovana tohanan'ny.
Mario Kart Tour dia azo alaina ao amin'ny App Store
Ny lalao finday vaovao an'i Nintendo, Mario Kart Tour, dia azo jerena ao amin'ny Apple App Store maimaim-poana.
Mitandrema amin'ny WhatsApp: afaka mamaky anao toa an'i Albert Rivera izy ireo
Ny zoma lasa teo, i Albert Rivera, mpitarika olom-pirenena iray, dia voajirika ny kaontiny WhatsApp. Vitan'izy ireo ny niditra ny mombamomba azy, ...
Ny iPhone 2020 dia hanana 5G manaraka
Ary farany, ny tale jeneralin'ny Disney Bob Iger dia nidina avy tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Apple
Araka ny tsiliantsofina volana vitsivitsy lasa izay, ny fanombohana ny Apple TV + dia manamarika ny fialàn'i Bob Iger, CEO an'ny Disney, avy amin'ny filankevi-pitantanana Apple.
Keynote 2019: Izay mbola tsy hitantsika androany
Eny, vao nifarana ny Keynote 2019, izay ilay kintana lehibe dia ilay iPhone 11 vaovao, saingy misy ...
Keynote 2019: anjaran'ny Apple Watch andiany 5
Manohy ny teny fototra tamin'ny taona 2019. Rehefa avy nampahafantatra ny tenanay tamin'ny sehatra filalaovana Apple Arcade sy ny vaovao 10,2 ipad…
Keynote 2019: atombohy amin'ny Apple Arcade ilay seho
Amin'ny fito ora dia efa nanomboka ny keynote Apple nandrasana hatry ny ela. Tim Cook dia nanao ny topimaso…
Ora vitsy talohan'ny nanombohan'ny iPhone vaovao sy Apple Watch, ary toy ny mahazatra, ny tovolahy avy ao Cupertino dia nakatona ny fidirana amin'ny Apple Store an-tserasera.
Ny Keynote rahampitso dia hita ao amin'ny magazay Apple sasany
Ny keynote fanolorana ireo iPhones vaovao dia ho hita ihany koa ao amin'ny magazay Apple sasany.
Philips dia manavao ny faritra Hue mandritra ny IFA 2019
Nandritra io hetsika io dia nanapa-kevitra i Philips fa hanavao ny isan'ireo vokatra jiro manan-tsaina miaraka amina andiana vokatra mahaliana, ahita izany.
EaseUS MobiSaver: Fitaovana tsara indrindra hanarenana ireo data voafafa ao amin'ny iOS
Jereo hoe inona ilay EaseUS MobiSaver ary ahoana ny fampiasana azy amin'ny solosainao hahafahana mamerina angon-drakitra voafafa avy amin'ny fitaovanao iPhone na iOS.
Apple dia miomana hanokatra ny Apple Store Fifth Avenue sy ny goba fitaratra misy azy
Nopotehin'i Apple ilay scaffold izay manodidina ny kiba malaza an'ny Apple Store namboarina tamin'ny Fifth Avenue, izay manondro fa akaiky ny fisokafany.
Amin'ny WhatsApp dia ho afaka hihaino ireo audio avy amin'ny fampandrenesana atsy ho atsy ianao
Amin'ny WhatsApp dia afaka mihaino ireo audio avy amin'ny fampandrenesana ianao amin'ny fanavaozana manaraka
Ny iPhone XR an'ny taranaka faharoa dia hanana RAM 1 GB fanampiny
Ny taranaka faharoa an'ny iPhone XR, dia hahita ny habetsaky ny RAM nitombo 1 GB, mahatratra 4 GB amin'ny fitambarany.
Fitaovana ao amin'ny iOS 13 no manambara ny solomaso AR an'ny Apple
Averina indray, ny solomaso Apple augmented reality azo atao dia miseho amin'ireo mety ho an'ny fehezanteny amin'ny 10 septambra.
Fomba, amin'ny horonan-tsary, ny fomba fanaovana AirPod volamena, vita amin'ny mpanao firavaka matihanina
Amin'ity horonantsary ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahanao manamboatra AirPod amin'ny volamena 18 karat, raha mbola manana ny fitaovana ilaina izahay.
Apple mividy trano birao vaovao roa ao Cupertino
Apple dia nividy trano birao vaovao roa tany Cupertino hanitatra ny toerana misy ho an'ny tetik'asa orinasa ankehitriny sy ho avy.
Apple TV + dia hanohana ny fijerena ivelany ary hametra ny ony miaraka
Apple TV + dia hanohana ny fijerena fampidinana avy eo ary hametra ny ony miaraka amin'ireo fitaovana marobe indray mandeha
Apple Mandefa ny Apple Arcade Early Access Program
Ny sary voalohany amin'ny fidirana aloha ho an'ny mpiasan'ny Apple an'ny Apple Arcade dia tafaporitsaka, fidirana izay natombok'izy ireo $ 0.49 ihany.
Ireo mpitrandraka manome volamena an'i Apple dia manolo-tena amin'ny tontolo iainana
Ireo mpitrandraka amerikana mamatsy volamena an'i Apple ho an'ny boriboritany elektronika dia manolo-tena amin'ny tontolo iainana
Ny anaran'ny iPhone 11 vaovao dia re: IPhone Pro
Ny anaran'ny iPhone 11 vaovao dia re: IPhone Pro. CoinX nisioka azy androany. Navoaka ihany koa ny angona avy amin'ny iPhone XS herinandro talohan'ny nanombohany.
Apple Music for Artist dia azo alaina amin'ny endriny farany
Toy ny YouTuber na izay te hahalala izay angona mifandraika amin'ireo horonan-tsary ...
Hividy iPad ve ianao nefa tsy fantatrao izay iray? Hiezaka hanampy anao aho. Hevitra efatra fotsiny no hazavaiko sy ireo maodely efatra misy
Ny detector Apple Watch's fall dia manampy amin'ny famonjena ny ain'ny epileptika.
Ny detector Apple Watch's fall dia manampy amin'ny famonjena ny ain'ny epileptika. Nampandre ny loza tampoka SOS sy ny vadiny izy
Apple dia ho hentitra ary tsy hamela ny fampiasana Apple Card amin'ny fitaovana izay napetraka ao amin'ny Jailbreak na firmware tsy ofisialy
Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 12.3
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia tsy mamela intsony hanao sonia ireo kinova iOS 12.4 teo aloha tamin'ny alàlan'ny mpizara azy ireo, hany ka afaka mametraka ny iOS 12.4 fotsiny izahay
Araka ny voalazan'i Kuo, ireo iPhone telo izay hivoaka amin'ny taona 2020 dia hifanaraka amin'ny 5G
Araka ny voalazan'i Kuo, ireo maodely iPhone telo izay hamely ny tsena amin'ny taona 2020 dia hifanaraka amin'ny teknolojia 5G.
Apple dia te hampiditra ny modem 5G azy amin'ny fitaovana sasany amin'ny 2021
Apple dia te-hanomboka hamorona modem 5G azy manokana ary hametaka azy ireo amin'ny fitaovany amin'ny 2021
"Ny dian-tongotry ny ratsy", tantara iray nahitana ilay mpamono olona noho ny iPhone X.
"Ny dian-tongotry ny ratsy", tantara an-tsehatra mpitsikilo napetraka tao amin'ny fihadiana tany Atapuerca izay ahitan'izy ireo hoe iza ilay mpamono olona noho ny iPhone X
StayGo dia mampitombo ny seranan-tsambo amin'ny solosainao finday na iPad Pro
Izahay dia mamakafaka ny StayGo USB-C Hub vaovao avy amin'ny South South, vahaolana tsara indrindra ho an'ny birao na hampiasaina amin'ny fitaterana izay mihamaro amin'ny seranan-tsambon'ny iPad Pro.
Apple mividy ny fizarana modem an'ny Intel $ 1.000 miliara
Apple dia manamafy fa mahazo ny fizarana modem an'ny smartphone an'ny Intel, ny patanty ary ny mpiasa ao aminy, sahabo ho $ 1000 lavitrisa.
Famerenana headphones Powerbeats Pro: misy vidiny ny kalitao sy ny fahaleovan-tena
Nodinihinay ny headphones vaovao True Wireless mitondra ny marika Beats an'ny Apple. Fahaleovan-tena tsy manam-paharoa, tena ahazoana aina ary manana kalitaon'ny feo tena tsara.
LG dia hampihatra ny AirPlay 2 sy HomeKit amin'ny fahitalaviany amin'ny herinandro ambony
Ny orinasa Koreana Tatsimo dia ho vonona amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny AirPlay 2 sy HomeKit amin'ny maodelin'ny fahitalavitra sasany.
Ireo no iPhone 11 telo izay natombok'i Apple tamin'ny fararano iny
Miaraka amin'ireo honohono tato anatin'ny andro vitsy lasa izay, mamintina ireo zava-baovao vaovaon'ireo telo modely iPhone 11 hatolotr'i Apple amin'ity fararano ity isika.
Nilaza i Pegasus fa manana fidirana amin'ny iCloud, FaceBook, Microsoft ary serivisy hafa indray
Mihetsika indray ny malware Pegasus ary milaza fa hiditra amin'ny kaonty iCloud, Facebook, Microsoft, Google, sns.
Ny tsiliantsofina dia milaza fa afaka miverina ny sary famantarana Rainbow Apple
Tsaho vaovao momba ny fanovana ny sary famantarana amin'ny fitaovana Apple dia manondro fa ho akaiky hiverina ilay avana, mino izany ve ianao?
Afaka herintaona dia hanana iPhone tsy misy "notch" sy Touch ID isika
Ny tatitra momba ny mpandalina vaovao dia manome toky fa afaka herintaona dia hisy iPhoen tsy misy marika izay hanana Touch ID ho rafitra famantarana.
Apple Music for mpianatra dia manitatra ny vanim-potoana fitsapana hatramin'ny 6 volana
Apple dia nampitombo avo roa heny ny fe-potoana fitsapana Apple Music ho an'ny mpianatra, manomboka amin'ny fanomezana 3 ka hatramin'ny 6 volana maimaim-poana.
Nintendo dia mandefa ny lalao angano Dr. Mario World ho an'ny iOS
Nintendo dia mandefa ny lalao iOS Dr. Mario World indray andro mialoha ny fandaharam-potoana, ny fizarana izay hilalaovantsika mikraoba mamono miaraka amin'ny fanampian'ny Mario Bros.
Ny tombony azon'i Samsung dia latsaka 56% amin'ny telovolana faharoa amin'ny taona
Samsung, toa an'i Apple, dia iray amin'ireo tratry ny fihenan'ny fivarotana finday avo lenta manerantany.
Azontsika atao koa ny mampifandray ny AirPod roa amin'ny iPhone tokana amin'ny iOS 13
Mitory an'i Samsung izy ireo noho ny filazany fa misy ny fanoherana ny rano amin'ireo terminal ao aminy izay tsy misy
Ny Fikambanan'ny mpanjifa Aostralianina dia niampanga an'i Samsung ho diso hevitra tamin'ny dokambarotra momba ny fihenan'ny rano ny terminal-n'ny terminal
Inona no fantatrao momba ny finday avo lenta? Manasongadina ireo mpampiasa iOS ny fanadihadiana
Natao hampisaintsainana antsika vetivety ny valan-javaboary, saingy ilaina ny mahafantatra ny hevitry ny ...
Afaka nifidy ny TouchID ambanin'ny efijery any Shina i Apple
Tsaho vaovao milaza fa afaka mandefa iPhone vaovao miaraka amin'ny Touch ID voafetra amin'ny tsena sinoa i Apple mba hampihena ny vidiny
Ny lova navelan'i Jony Ive tao amin'ny Apple: ny fahombiazany lehibe ary ny tsy fahombiazany
Jonathan Ive, ilay mpamorona britanika malaza efa niasa tao amin'ny Apple efa ho telopolo taona izao dia nanambara fa tsy miasa intsony ...
Fa maninona i Jony Ive no mandao an'i Apple? Fiarahabana nanomboka ny efa-taona lasa izay
Jony Ive dia nanambara fa handao an'i Apple izy mba hanomboka hiasa amin'ny orinasan-endriny manokana, amin'ny fanapahan-kevitra efa naharitra efa-taona izay.
Manomboka mizara ny satan'ny WhatsApp sy Facebook ny fitsapana tena izy
Ny fizahan-toetra voalohany hizarana ny satan'ny WhatsApp sy Facebook dia efa zaraina amin'ireo mpampiasa, izy ireo no beta voalohany
Ity foto-kevitra mahaliana ity dia manome antsika vahaolana amin'ireo olan'ny fifandraisana rehefa mahazo antso isika
Ny interface ny antso nomen'ny iOS anay foana dia iray amin'ireo lafiny ratsy indrindra amin'ity sehatra ity, interface izay mety hitovy amin'ity
Movistar + dia nohavaozina ary ankehitriny mamela anao hamorona mpampiasa sy handrakitra atiny
Movistar no manana tolotra audiovisual lehibe indrindra azontsika ananana any Espana ankehitriny, ary izy io no mampivondrona ny atiny tsara indrindra avy amin'ny ...
Ahoana ny fametrahana ny piraofilina iOS 13 Beta hahazoana fanavaozana ny OTA
Ity no fomba ahafahanao mankafy mora ny fanavaozana iOS 13 OTA miaraka amin'ny mombamomba anao alaina.
Ny fakantsary Nest amin'ny tanana faharoa dia mbola azon'ny tompona voalohany nidirana
Mbola azon'ny mpividy nividy azy io ny fakantsary fiarovana faharoa an'ny Nest.
Ny fandefasana finday avo lenta dia latsaka manerantany araka ny tatitry ny Trends Internet an'i Mary Meeker
Reny iray nahavita nanavotra ny ain'ny zanany vavy noho ny fiasa Find My Friends
Misaotra ny finday Find My Friends, Macy, tovolahy 17 taona, dia afaka hitan'ny ray aman-dreniny ka namonjy ny ainy.
Apple dia namoaka Beta faharoa an'ny iOS 13 sy iPad OS ho an'ny Developers
Apple dia nanamboatra ny beta 2 an'ny iOS 13 sy ny beta ...
Skid Facebook vaovao izay nanala sarona angona avy amin'ireo mpampiasa sahabo ho 187.000
Fanavaozana iMovie manampy ny effet an'ny écran maintso
Ny fanavaozana farany indrindra ny fampiharana iMovie ho an'ny iOS dia manampy ny vokatra maitso lamba ahafahantsika manala ny ambadiky ny horonan-tsary voarakitra alohan'ny efijery maitso na manga
iPadOS dia mety hitondra Siri malina kokoa
iPadOS, ny rafitra miasa manokana an'ny iPad - ary antenaina maro - dia efa eo amintsika, farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny ...
Apple mihomehy an'i Rob McElhenney amin'ny tranofiara vaovao ho an'ny Apple TV + hatsikana Mythic Quest
Ny lehilahy Cupertino dia namoaka ilay tranofiara vaovao Mythic Quest ho an'ny Apple TV + parodying Star Sunny foana Rob McElhenney.
Ny iOS 12.3.2 dia misy ankehitriny hamahana ireo olana amin'ny maodely fakana sary amin'ny iPhone 8 Plus
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo tovolahy avy ao Cupertino izay ho ny kinova iOS vaovao, manokana ny isa ...
Sintomy ny rindrambaiko ofisialin'ny iOS 13
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia nanapa-kevitra izahay fa hanao kompilation amin'ireo sary ofisialy ofisialin'ny iOS 13, hahafahanao misintona azy ireo maimaim-poana.
Notsapainay ny Satechi HUB sy ny USB-C Cable ho an'ny iPad Pro
Nosedraina ny tariby Satechi HUB sy USB-C ho an'ny iPad Pro izahay, izay saika fitaovana tsy maintsy ananana ho an'ny mpampiasa takelaka Apple
Ny 3D Touch dia novaina tao amin'ny iOS 13, ankehitriny dia miasa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko
Ny 3D Touch dia iray amin'ireo fiasan'ny telefaona an'ny orinasa Cupertino izay heverinao fa tsy ilaina raha tsy ...
Ahoana ny fametrahana ny iOS 13 beta amin'ny iPhone
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia mitondra anao hatrany ireo totoriale tsara indrindra ary anio dia ampianarinay anao ny fomba fametrahana ny iOS 13 beta haingana sy mora.
Fitaovana mifanaraka amin'ny iOS 13
Miaraka amin'ny fanolorana ny kinova iOS manaraka, iOS 13, maromaro ny fitaovana very ankoatrany, na iPhone na iPad.
Apple dia hanana ny anjarany hamaly ny raharaha Spotify ao amin'ny EU
Apple dia hohenoina ao amin'ny EU amin'ny tranga Spotify. Mbola mitohy miaina bebe kokoa noho ny hatramin'izay ny opera savony ary ankehitriny, fampahalalana bebe kokoa no takiana amin'ny UE
Amazon dia manolotra fampiroboroboana mandritra ny 30 andro MAIMAIM-POANA hankafizanao ny serivisy mozika Amazon Music Unlimited. Lazainay aminao ny fomba hanararaotana ny tolotra!
Ny varotra Wearables tamin'ny telovolana voalohany 2019 dia nitombo 55%
Ny fivarotana fitafiana azo anaovana dia mitombo hatrany isan-taona, fa tsy noho ny Apple ihany, fa noho ireo mpanamboatra ihany koa.
Apple dia mamorona rafitra iray hanakanana ireo fitaovana mamela fivarota